🥇 ▷ Ka waran haddii Samsung taleefanka gacmeedkiisa isku laaban karo aan loogu yeedhin Galaxy X dhammaan? ✅
Ka waran haddii Samsung taleefanka gacmeedkiisa isku laaban karo aan loogu yeedhin Galaxy X dhammaan?
Sida muuqata inkasta oo aanu maqnayn warar gaar ah oo dabeecad ah hadana waxaan sii wadnaa ka hadalka Galaxy X. Laakiin markan waxay noqon kartaamarkii ugu dambeysay. Hilib-yaqaanka MMDDJ, oo dhowaan ku firfircoon arrimaha Samsung, ayaa soo dhigay bartiisa twitter-ka (waxaad ka heli kartaa dhamaadka maqaalka) illaa iyo inta ay iska caddahay taas oo uu sheegay in qalabka duubista ee muddada dheer la sugayay ee shirkadda Kuuriya looma magacaabi doono Galaxy X.
Maaddaama sheegashada isticmaaleyaashu badanaa yihiin kuwo la isku halleyn karo, ma caawin karno qaado birqabato macluumaad aad u kala fog intaas ka dib oo aan ka wada hadalnay. In alla intii ay taasi naga yaabin lahayn. Bartiisa twitterka si kasta oo ay ahaataba waxay kaga jawaabtay sheegashadaas Samsung waxay diyaarineysaa khad cusub oo casriga casriga ah.
AKHRISO: Cusboonaysiin loogu talagalay geeska ‘Galaxy S7’
Halkaa marka la joogo soo jeedinta ah in magaca “Galaxy X” loo sii hayn karo aaladda noocan oo kale ah waa lama huraan. Marka maxaa loo yeerayaa chimera isku laabma? Wax talooyin ah weli ma muuqdaan macno ahaan iyo si cad oo aan u dareemaynayno inaan u maleyneynno. Haddii xanta wareega ee bilowga bisha ay run noqoto, kulligeen waan ogaan doonnaa wax badan bilaha soo socda, marka la eego soo bandhigidda CES 2019.
BTW, taleefanka casriga isku laaban karo looma magacaabay Galaxy X. https://t.co/kb7TEDlrdL
– 萌萌 的 电教 (@MMDDJ_) Luulyo 23, 2018
Via: Telefon ArenaXigasho: MMDDJ (Twitter)